Madaxweynaha cusub ee Ghana oo maanta xilka loo dhaarinayo - BBC News Somali
Madaxweynaha cusub ee Ghana oo maanta xilka loo dhaarinayo
Mudane Akufo-Addo wuxu xilka madaxtinimada u tartamay 2008 iyo 2012-kii
Madaxweynaha la doortay, Nana Akufo-Addo, ayaa loo dhaarin doonaa xilka madaxweynenimo ee dalka Ghana ka dib markii uu doorashadii bishii hore dhacday kaga adkaaday madaxweynaha xilka hayey, John Mahama.
Ilaa kow iyo toban madaxweyne oo Afrikaan ah iyo in ka badan lix kun oo qof ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan xafladda dhaarinta oo ka dhacaysa caasimadda Accra, halkaas oo nabadgelyadana aad loo adkeeyy.
Mudane Akufo-Addo waa 72 jir ahaan jiray qareen u dooda xuquuqda aadanaha, waxaanu ballan qaaday inuu waxbarashada dugsiga sare ka dhigi doono bilaash iyo inuu dhisi doono warshado badan. Hase yeeshee dadka dhaliilaa waxay su'aal geliyeen sida loo joogtayn karo himiladan uu qabo.
Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga New Patriotic Party wuxu doorashadan ku guulaystay markan oo ahayd isku daygiisii saddexaad, waxaanay doorashadani ahayd mid ololaheeda uu xuddun u ahaa ahaa dhaqaalaha dalka oo la buunbuuniyey.